Kanjani ukwenza nsuku zonke sekhefu yaphenduka iholidi ngezinzuzo zempilo? Impendulo silula! Ungasiza yesimanje futhi ukhululekile umcamelo-nentshe. Kuzoba esisemqoka labo abakhetha ukuthatha isihlwathi nganoma yisiphi isikhathi esikahle, futhi iyasiza ngenkathi kuhanjwa.
Izinzuzo esemqoka imicamelo
Kuyasiza ukulala ngokushesha futhi umnikeza amandla lithuthukisa ngosuku.
umcamelo abahlukile ihlanganisa izingalo futhi ikhanda womnikazi wayo, okuvumela ilungelo ukuphumula etafuleni lakho.
Umkhiqizo ine ijamo yasekuqaleni futhi ekhangayo kusiza ukukhulisa isipiliyoni ukuthula nokuzola.
Umcamelo ibizwa ngokuthi "intshe ', njengoba abantu isikhashana nje ukhumbuza nentshe, ubhapathizelani ikhanda lakho esihlabathini, ukuze extricate uqobo ngalesi nezwe.
Ngalo ungakwazi kalula futhi kahle ukulala kunoma iyiphi indawo efanelekayo. Kwanele ukuzigcina ikhanda lakho e umcamelo ukhululekile futhi bayakhohlwa zonke izinkinga zansuku zonke.
Lo mkhiqizo evula ubuthongo, inikeza ithuba silale kunoma isiphi isimo. Ukhululekile umcamelo-nentshe has a design esiyingqayizivele, ukudala isimo ehlukile umnini wayo. Ibe umkhiqizo omusha eziklanyelwe ukuze umuntu endaweni yomphakathi, wakwazi asonge izandla uphumule ngenkathi uzizwa umuzwa zobumfihlo.
umkhiqizo umcamelo-entsha eyenzelwe labo 'balele sendleleni "
Wenziwe ngesisekelo the amagilavu futhi has usayizi encane. Nabasunguli imikhiqizo emisha zithi engasiza indoda angasisiza ebuthongweni elahlekile noma kuphi. Cushion senziwa ngendlela yokuthi ingasetshenziswa kalula ngisho ehlezi ubuthongo.
Kuleli zwe lanamuhla, nokungalali yisimo engokwemvelo yomuntu. Futhi namhlanje, akukho ekhethekile yokuthi abantu emsebenzini angakwazi ukukhokhela ukuthatha isihlwathi kancane, futhi ngokusho kongoti, kuba ngisho okuhle empilweni yakho. Ukhululekile umcamelo-nentshe, esemgwaqweni ngezansi isithombe kusiza ukuzumeka kunoma isiphi isimo.
Ngubani kuqala wazama umkhiqizo omusha?
Abantu baseNew York baba abokuqala lucky ngubani ephethwe ukuhlola eseyintsha esiyingqayizivele. Abaklami Spanish ziye zasungula umcamelo enikeziwe ngokuqondile kubalandeli ukuhamba, njengoba kuyasiza kalula ukuzumeka on izithuthi zomphakathi noma esikhumulweni sezindiza, kodwa wanquma ukuyizama ku megacities izwe - United States, ngoba isigqi emnandi kunazo zonke ekuphileni. AbaseSpain bawuqonda ngokucacile incazelo lokuphumula, kusukela eSpain kubhekwa lapho kwazalelwa khona isithongwana (ntambama isihlwathi).
Izici yalesi umcamelo
It kungenziwa igqoke njengoba isigqoko, futhi noma kungavelani isikhashana ku indawo ethokomele uphumule.
Umkhiqizo uthambile kakhulu futhi has amathuba yokuphefumula mahhala, kodwa luvikelwe ngokuphelele ukukhanya umsindo.
Lokhu pad kuthokozise wonke umuntu! Omunye uye kuphela ukuzama!
isiguqo Innovative intshe Elisemqamelweni
Umcamelo-nentshe intshe umcamelo - umcamelo esiyingqayizivele ihlinzeka ubuthongo ezithambile noma kuphi. Nice impahla izinga kusuka kulo senziwa, wenze endaweni ethule, Lungadala isimo lapho uzizwa ethokomele futhi zikhululekile. Ukuze wenze lokhu, nje udinga ukubeka ikhanda lakhe ezandleni, bese umhlalaphansi futhi bazizwa zonke charm ubuthongo iDemo.
Lokhu umcamelo emangalisayo yasungulwa ngu nabaqambi inkampani Kawamura-Ganjavian, babuthana site ukuqoqa izimali e ekuqaleni abantu abadala "Kickstarter" dollar angaphezu kuka abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili ukwenziwa intshe Elisemqamelweni.
Inhloso esemqoka Abadali of the izindlela ukulala umcamelo-nentshe intshe Elisemqamelweni yisifiso ukunikeza abantu ithuba uphumule kancane, ukuthi wenze kube nzima kangaka ngenxa umsindo ambient befuna ehhovisi.
sokuthatha isithongwana iDemo
Ochwepheshe bathi sokuthatha isithongwana emifushane (ofika kumaminithi angu-20-30) kuthuthukisa okuhlushwa ukusebenza 30-40%. Izinguquko Ezenzeka izinjongo ezifana, futhi yasungulwa yithuluzi elihle, njengabo umcamelo intshe Elisemqamelweni. Ukuze ukusinika ithuba nganoma isiphi isikhathi futhi kuphi ukuze uzinike kancane uphumule futhi sithole amandla.
Ukusebenzisa umcamelo endleleni
Ukusetshenziswa njalo iningi pillows - ukusebenzisa ohambeni noma ukuhamba. Intshe Elisemqamelweni kuzokusiza uthole ukulala Isitimela ezinomsindo, umhlalaphansi abagibeli inomsindo kakhulu indiza, kanye eziphumulele nje, elinde ukulethwa isitimela esiteshini, noma izindiza esikhumulweni sezindiza.
Intshe Elisemqamelweni Lokhu isiguqo wenziwe eliphezulu futhi impahla ukhululekile, ukuthi akumele usufinyelele ngesikhatsi isitoreji, ephelele isikhwama elihlanzekile izinto izinga. Zonke imicamelo intshe Elisemqamelweni kukhona isandla eSpain, futhi lokhu kuqinisekisa izinga zabo ezinhle.
Musa ukuthenga izikhwama, enziwa e China! Okwamanje, inani elikhulu elinegazi ithengiswe imicamelo intshe Elisemqamelweni. Cishe, ngenxa yephunga ezingemnandi, yekhwalithi ephansi amalunga omzimba, noma izinto ezimbi, awukwazi ukuzwa izintelezi yayo.
Izinkampani eziningi kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-21 nikeza emakethe nge umcamelo-nentshe. Design Its yokuqala ivumela abantu ukuba uphumule ngisho endaweni lapho akunakwenzeka ukulala. Izilaleli abathengi zale divayisi engajwayelekile ubuthongo futhi ukuphumula likhula ngokushesha nge nyanga ngamunye odlulayo.
Umklami umcamelo-nentshe Relax Elisemqamelweni ukudala induduzo futhi aziphumulele endaweni yokuhlala
Ngeshwa, kuphela abanye abantu yesimanje Russian namuhla ukwazi ukuthi ukukhetha ilungelo umcamelo-nentshe. Kodwa, ngenhlanhla, ngibonga kule ungakwazi asakwazi ukuthola omunye wabo ngesikhathi ongaphakeme, intengo okungabizi.
Intshe Elisemqamelweni Nethezeka Elisemqamelweni-eyenziwe ngezisebenzi kakhulu, seamstresses ka hypoallergenic, eliphezulu, ngezinto zokwakha zesimanje.
Ngenxa kwaziswa komqamelo kulula anakekele. Geza kufanele ibe umshini wokuwasha.
Imikhiqizo induduzo yakho
Sebenzisa le ingubo kungaba yonke indawo. Kuyinto enhle kakhulu ngoba izinga ukuzilibazisa:
ngisho ebhentshini epaki.
Umcamelo-nentshe (izibuyekezo amakhasimende wanelisekile uqinisekise lesi) ku ubuso bayo enzelwe izimbobo. Kukhona imigodi unxantathu Nasolabial. Ukuqeda th ikhanda indoda Friend sika, ke umnikeza ithuba wehluleka ukukhokha noma iyiphi ukunakekela namathonya zangaphandle ezimbi.
Ngokufanele yakhelwe microclimate nokushaya komoya esiyingqayizivele kuqinisekisa ubuthongo okukhulu. Ngokuphawulekayo kunciphisa izingxabano yomgogodla wesibeletho wenziwe eliphezulu, izindwangu yesimanje collar ezihambisanayo.
Ukubeka endaweni enofonofo, usebenzisa nentshe umcamelo can ngisho abantu abanale komzimba kanye nezinye izifo eziningi.
Ngebuhle nebubi, nentshe umcamelo Nethezeka Elisemqamelweni
Uma une isifiso ukuthenga lokhu ingubo, kufanele kuphawulwe elinye ngokunenzuzo. Ukusebenzisa komqamelo, ungabona amaphupho ezihlukahlukene ezithakazelisayo, ngisho noma amazwi ahlukile wezwa emhlabeni futhi kukhanya ukukhanya okukhulu.
Inzuzo enkulu umkhiqizo ezintsha yilezi:
izinga okusezingeni eliphezulu;
ezinhle isihlwathi umnini wayo.
Namuhla fashion umcamelo-nentshe, intengo zazo ziyojabula, kukhona kakade ezweni ethandwa ukudayiswa inthanethi ezitolo. Izindleko zokhahlamba kusuka ruble 1,000 ukuze 2,000. Zuza enjalo umkhiqizo engavamile kungaba kokubili lwezeMpilo Usizo njalo.
Ukugwema buyiselo yemali ebolekwayo: Art. 177 Criminal Code
Ihhotela "Olga", ePrague: incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza